Izibophezelo zomqashi nezomqashwa ngokoMthetho Wezimo Zokusebenza | Law & More BV
Blog » Izibophezelo zomqashi nezomqashwa ngokoMthetho Wezimo Zokusebenza
Izibophezelo zomqashi nezomqashwa ngokoMthetho Wezimo Zokusebenza
Noma ngabe yimuphi umsebenzi owenzayo, umthetho oyisisekelo eNetherlands ukuthi wonke umuntu kufanele akwazi ukusebenza ngokuphepha nangokwempilo. Umbono walesi simiso ngukuthi umsebenzi akumele uholele ekuguleni ngokomzimba noma ngokwengqondo hhayi nakancane ekufeni ngenxa yalokho. Lo mgomo uqinisekisiwe ngokusebenza koMthetho Wezimo Zokusebenza. Ngakho-ke lesi senzo sihlose ukukhuthaza izimo zokusebenza ezinhle nokuvikela ukugula nokungakwazi ukusebenza kwabasebenzi. Ingabe ungumqashi? Uma kunjalo, ukunakekelwa kwendawo yokusebenza enempilo nephephile ngokuya nge-Working Conditions Act kuhambisana nawe. Ngaphakathi kwenkampani yakho, akumele kube nolwazi olwanele ngokusebenza okunempilo nokuphephile, kepha imihlahlandlela yoMthetho Wezimo Zokusebenza kufanele futhi ilandelwe ukuvikela ubungozi obungadingekile kubasebenzi. Ingabe uyisisebenzi? Kuleso simo, kulindeleke izinto ezimbalwa kuwe esimweni sendawo yokusebenza enempilo nephephile.
NgokoMthetho Wezimo Zokusebenza, umqashi ekugcineni unesibopho sezimo zokusebenza ngokubambisana nomqashwa wakhe. Njengesisebenzi, ngakho-ke kufanele ubambe iqhaza ekwakheni indawo yokusebenza enempilo nephephile. Ngokuqondile, njengesisebenzi, ngenxa yoMthetho Wezimo Zokusebenza, ubophekile:
ukusebenzisa izinto zokusebenza nezinto eziyingozi ngokufanele;
ukungashintshi futhi / noma kususwe ukuvikelwa kokusebenza kwempahla;
ukusebenzisa izinto zokuvikela / zokusiza ezenziwe ngumqashi ngendlela efanele nokuzigcina endaweni efanele;
babambisane olwazini oluhlelekile nasekufundisweni;
ukwazisa umqashi ngobungozi obubonwe empilweni nasekuphepheni enkampanini;
ukusiza umqashi nabanye abantu abangochwepheshe (njengesiphathimandla sokuvikela), uma kunesidingo, ekwenzeni izibopho zabo.
Ngamafuphi, kufanele uziphathe kahle njengesisebenzi. Lokhu ukwenza ngokusebenzisa izimo zokusebenza ngendlela ephephile nangokwenza umsebenzi wakho ngendlela ephephile ukuze ungazibeki wena kanye nabanye engcupheni.
Ukuze ukwazi ukunikeza indawo yokusebenza enempilo nephephile, wena njengomqashi kufanele ulandele inqubomgomo ebhekiswe ezimweni zokusebenza ezingcono kakhulu. Umthetho Wezimo Zokusebenza unikeza umkhombandlela wale nqubomgomo nezimo zokusebenza ezihambisana nayo. Isibonelo, inqubomgomo yezimo zokusebenza kufanele kunoma yisiphi isimo iqukathe i- ukubalwa kwezinhlekelele kanye nokuhlola (RI&E). Njengomqashi, kufanele usho ngokubhala ukuthi umsebenzi ubungozi obungakanani kubasebenzi bakho, ukuthi lezi zingcuphe kwezempilo nokuphepha zibhekwa kanjani enkampanini yakho nokuthi iziphi izingozi ngendlela yezingozi zomsebenzi esezenzekile. A isikhulu sezokuvikela ikusiza ukuba wakhe uhlu lwezinto ezinobungozi nokuhlola futhi unikeze izeluleko ngenqubomgomo yezempilo nokuphepha enhle. Yonke inkampani kufanele iqoke okungenani isikhulu esisodwa sokuvikela. Lo akumele kube ngumuntu ovela ngaphandle kwenkampani. Ingabe uqasha abasebenzi abangama-25 noma abambalwa? Ngemuva kwalokho ungaziphathisa okokuvikela.
Enye yezingozi noma iyiphi inkampani eqashe abasebenzi engabhekana nayo ukungayi emsebenzini. NgokoMthetho Wezimo Zokusebenza, wena njengomqashi kufanele ube ne inqubomgomo yokungabikho kokugula. Ingabe wena njengomqashi ubhekana kanjani nokungayi emsebenzini uma kwenzeka enkampanini yakho? Impendulo yalo mbuzo kufanele uyiqophe ngendlela ecacile nenele. Kodwa-ke, ukunciphisa amathuba okuthi ubungozi obunjalo bufezeke, kungakuhle ukuthi ube ne- ukuhlolwa kwezempilo ngezikhathi ezithile (PAGO) kwenziwe ngaphakathi kwenkampani yakho. Ngesikhathi sokuhlolwa okunjalo, udokotela wenkampani wenza uhlu lokuthi unezinkinga zempilo ngenxa yomsebenzi. Ukubamba iqhaza ocwaningweni olunjalo akuphoqelekile kumqashwa wakho, kepha kungasiza kakhulu futhi kube nomthelela kumbuthano wabasebenzi onempilo futhi obalulekile.
Ngaphezu kwalokho, ukuvimbela ezinye izingozi ezingalindelekile, kufanele ukhethe i ithimba lokuphendula ngaphakathi (BHV). Isikhulu esiphendula ngezimo eziphuthumayo senkampani siqeqeshelwe ukuletha abasebenzi namakhasimende ezokuphepha esimweni esiphuthumayo futhi ngalokho sizonikela ekuphepheni kwenkampani yakho. Ungazinqumela ukuthi ungakhetha bani nokuthi bangaki abantu ozobaphendula njengesimo esiphuthumayo. Lokhu kusebenza futhi endleleni impendulo yezimo eziphuthumayo yenkampani ezokwenzeka ngayo. Kodwa-ke, kufanele ubheke usayizi wenkampani yakho.
Yize kunemithetho nezimiso ezisebenzayo, izingozi zomsebenzi zisenzeka minyaka yonke eNetherlands ebingavinjelwa kalula ngumqashi noma umsebenzi. Ukuba khona nje koMthetho Wezimo Zokusebenza akubonakali kwanele ngaso sonke isikhathi ukuqinisekisa umgomo wokuthi wonke umuntu kumele akwazi ukusebenza ngokuphepha nangempilo. Yingakho i-Inspectorate SZW ibheka ukuthi abaqashi, kodwa nokuthi abasebenzi bayayilandela yini imithetho yokusebenza okunempilo, okuphephile nokungenzeleli. Ngokuya nge-Working Conditions Act, i-Inspectorate ingaqala uphenyo uma kwenzeka ingozi noma lapho umkhandlu wabasebenzi noma inyunyana ifuna lokho. Ngaphezu kwalokho, i-Inspectorate inamandla amakhulu nokusebenzisana kulolu phenyo kuyimpoqo. Uma i-Inspectorate ithola ukwephulwa koMthetho Wezimo Zokusebenza, ukumiswa komsebenzi kungaholela ekuhlawulisweni okukhulu noma ebulelesi / ecaleni lezomnotho. Ukuvikela lezi zinyathelo ezinkulu kangaka, kungakuhle wena njengomqashi, kodwa futhi njengomsebenzi, ukuthi uhambisane nazo zonke izibopho zoMthetho Wezimo Zokusebenza.
Ngabe unemibuzo maqondana nale bhulogi? Bese uxhumane Law & More. Abameli bethu bangongoti emkhakheni womthetho wokuqashwa futhi bayakujabulela ukukunikeza izeluleko.
Thumela Previous Isivumelwano esiyimpoqo: Ukuvuma noma ukungavumelani?
Post Next Ukwesula